ကိန်းနှစ်လုံးရဲ့ အနီးစပ်ဆုံးတူညီသော အဖြေကိုရှာခြင်း - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
ကိန်းနှစ်လုံးရဲ့ အနီးစပ်ဆုံးတူညီသော အဖြေကိုရှာခြင်း
ကိန်းနှစ်လုံးရဲ့ အနီးစပ်ဆုံးတူညီသော အ
ကျနော်ကိုလဲ အသိတစ်ယောက်က လာခေါင်းစားသွားတာပါ။ အကြောင်းအရာကတော့ Fuzzy Logic အခြေခံ ပုဒ်လေးတွေပဲလို့ ကျနော်ထင်ပါတရ်။ ကျနော်လဲ အဖြေ အတိအကျ မပြောပြနိုင်လို့ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းတွေဆီက အကြံဥာဏ်တောင်းခံတာပါ။
ပုစ္ဆာလေးကတော့ “Project တခုမှာ User ထည့်လိုက်တဲံ Number တစ်ခုကို Database ထဲမှာ ထည့်ပြီးသာ Number တွေနဲံ နှိုင်းယဉ်ပြီးတော့ ဘယ်လောက် အနီးစပ်ဆုံး တူသလဲ ဆိုတာ တွက်ပေးရမှာ..။ ဘယ်လိုပုံစံမျိုး တွက်ပေးရမလဲ မသိဖြစ်နေတယ်...။ ဥပမာ ဗျာ Database ထဲမှာ ၅၊ ၁၀၊ ၁၂၊ ၁၈၊ ၂၀ ကြိုပြီး ထည့်ထားတယ်ဆိုပါဆို..။ User က ၁၀ ဆိုပီး ထည့်လိုက်ရင် ရှိပြီးသာ ၁၀ နဲ့က ၁၀၀ ရာခိုင်းနှုန်းတူတယ်..။ ၁၂ နဲ့ကျတော့ ဘယ်လောက် တူတယ်..။ ၁၈ နဲ့ဆို ဘယ်လောက်တူတယ်.. အဲလိုပံစံမျိုး List လုပ်ပေးရမှာ...။”
အဲ့လိုပုစ္ဆာလေးပါ။ စဉ်စားပုံ စဉ်းစားနည်းလေး မျှဝေပေးကြပါအုံး။ ကျနော်အထင်ကတော့ မှတ်ထားတဲ့ ကိန်းနဲ့ ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ ကိန်းနဲ့ကြားက ခြားနားချင်းကို % ရှာလိုက်တာလား။ အဲ့လိုထင်မိပါတရ်။ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတရ်။
ပို့စ် 98 ခုအတွက် 665 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - ကိန်းနှစ်လုံးရဲ့ အနီးစပ်ဆုံးတူ&
စဉ်းစားပုံ့ စဉ်းစားနည်း ပဲပြောလို့တတ်မယ် ကျွန်တော်လဲ အဲဒီမေးခွန်းကိုအူကြောင်ကြောင်နဲ့
၁။ ၅ ၁၀ ၁၅ ၂၀ လို့ကြိုထည့်ထားမယ်
၂။ ၁၀ ရိုက်ရင် ၁၀ နဲ့က ၁၀၀ ရာခိုင်းနှုန်းတူတယ် ဒါမှန်တယ်
၃။ ၁၂ နဲ့ကျရင် ဘယ်လောက်တူမှာလဲ အဲဒါကို ဘယ်လိုနှိုင်းယှဉ်ခိုင်းတာလဲ ၁၂ အပြင် နောက်အညွှန်းကိန်းတစ်ခုလိုမနေဘူးလား
၁၀ ဟာ ၂၀ နဲ့ဆိုရင် ၀% နှုန်းတူတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတယ်။ ဒါဆိုရင် ၁၂ နဲ့ဆိုရင် ၈၀%တူရမယ်။
၄။ ၁၀ နဲ့ ၁၀ = ၁၀၀ %
၁၀ နဲ့ ၁၂ = ??
၁၀ နဲ့ ၁၀၀ =??
ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တွက်ရင် Limit ဒါမှမဟုတ် Reference တစ်ခုထားပေးမှ ရာခိုင်နှုန်းတွက်လို့ရမယ်
၁၀ နဲ့ ၁၂ နဲ့ဆိုတာ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဆိုရင် Limit မရှိရင် ကြိုက်တာပြောလို့ရတယ်။ ၁၀ နဲ့ ၁၂ ကြားမှာ ကိန်းပေါင်း Infinity ရှိတယ်။ ရာခိုင်နှုန်းကိုသူ့အတိုင်းတွက်လို့မရဘူး။(ကျွန်တော်ပဲ ဥာဏ်မမှီတာဖြစ်မှာပါ)
င်္Fuzzy Logic လို့ပြောတဲ့အတွက် Fuzzy အတွက် Formula တွေ သို့ Algorithm တွေရှိမှာပေါ့။
နောက်ပြီး ဒီဥစ္စာက Decision Making အတွက်သုံးမယ့်ဟာလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ ရေးရေးထင်ရတယ်။ အဲဒါတွေရှာကြည့်ပါ။
Last edited by MegaWooer; 05-02-2011 at 04:12 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ MegaWooer အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
တီဘွား, ဇော်ရဲပိုင်, bonge
Find More Posts by MegaWooer